Emirati iray mpiaro zon’olombelona, maty tampoka saingy namela lova · Global Voices teny Malagasy
'Niaro an-drainy aloha i Alaa vao niaro ny zon'ny hafa'
Voadika ny 24 Jona 2021 6:46 GMT
Alaa Al-Siddiq, Emirati mpiaro zon'olombelona. Nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Lahatsoratra nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraka ao amin'ny Gulf Center for Human Rights (GCHR), fikambanana iray tsy miankina, tsy mikatsaka tombony ara-bola ary mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, hanorina fikambanana, sy hifamory am-pilaminana ao amin'ny faritra MENA.
Maty tamina lozam-pifamoivoizana tamin'ny 19 Jona ilay Emirati mpiaro zon'olombelona, Alaa Al-Siddiq, 33 taona, tale mpanatanteraky ny ALQST momba ny zon'olombelona, izay nanana ny biraony tao Londona no sady zokiolona mpikaroka tao amin'ny Wejha Center for Studies. Niteraka onjam-pahatairana sy alahelo teny anivon'ny olona marobe nanerana ny tontolo arabo, hatramin'ny antso fitakiana amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) mba hanao fanadihadiana hahafantarana ny antony nahafaty tampoka azy. Ho fahatsiarovana ireo fandraisana anjara marobe nataony, niverenanay notsidihana ny diary virtoaliny mba hanehoana ny fahasahiana manainga fanahy sy ny finoany tsy azo nohozongozonina an'ireo fitsipitondrantenan'ny olombelona sy ny lanjan'ny fahalalahana.
Ny 10 Jona 2010, vao teo amin'ny faha-22 taonany monja, namorona ny tenifototra #inaljnah (#any an-danitra any) i Alaa hanehoany ny tena ahiahiny, tamin'ny fanipihana tao anatina andiana bitsika maro mampihetsi-po, ny fomba fahitàny ny lanitra, toerana iray tsy hitomanian'ny reniny ary hanajàna ireo sivily sy ny zo maha-olona ny olompirenena.
Pikantsary avy amin'ireo andiana bitsika nalefan'i Alaa tamin'ny 2010 niaraka tamin'ny tenifototra #InHeavens
“Any an-danitra any, tsy hitomany ny reniko
Any an-danitra any aho afaka hiteny izay tiako lazaina
Any an-danitra any aho hahita ireo gadran'ny Tazmamart [fonja miafina any Maraoka]
Any an-danitra any hisy lanonana fanomezana voninahitra an'ireo nogadraina noho ny fanehoany hevitra sy ny politika
Any an-danitra any, hanana ny zony feno ireo vehivavy”
Tamin'ny alàlan'io tenifototra io ihany, nandefa bitsika bebe kokoa izy namaritany ireo fanontaniana filôzôfika sy faniriana nentanin'ny fanajàny lalina ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana ho an'ny fireneny, ary ny firoboroboana sy ny fandriampahalemana ho an'ireo firenena any amin'ny faritra.
Ny 10 Desambra 2012, tao amin'ny tranonkalany WordPress, tao anaty lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe “Atombohy amin'izay rariny fa tsy izay azo ekena” dia nitanisa andàlana iray avy ao amin'ny “Azazeel” i Alaa, tantara iray noforonina tamin'ny 2008 an'ilay Egiptiàna mpanoratra, Youssef Zeidan: “Nahoana aho no hatahotra fahafatesana? Ny fiainana no tokony hatahorako bebe kokoa, io no mampangirifiry indrindra.”
Tamin'ny nampidirana am-ponja ny rainy tany amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE), sy nifindran'ny fianakaviany ho any Qatar taorian'ny nanesorana taminy ny zom-pirenena Emirati, nandeha niaina an-tsesitany tany Londona i Alaa, tafasaraka tamin'ireo rehetra havan-tiany nandritra ny taona sivy mahery. Ny vadin'i Asmaa rahavaviny koa, Omran Ali Al-Radwan Al-Harthy, dia gadra noho ny fanehoankevitra, izay mbola any am-ponja na efa ho roa taona aza izao no vita ny sazy fito taona nomena azy, tamin'ny 16 Joaly 2019.
Ity ny tantaran'ny iray amin'ireo tanora manan-talenta ao Emira. Nanapaka hevitra ny handevina ny fahaizany any amin'ny iray amn'ireo fonja ratsy indrindra eto an-tany ireo manampahefana ao amin'ny fireneny, noho izy tsy nitaky afa-tsy ny zony hahazo maneho an-kalalahana ny heviny. Ity ny tantaran'i Imran Al-Radwan.
Ny Martsa 2021, ny Vondron'asa avy amn'ny Firenena Mikambana momba ireo Fitazonana tsy an-drariny dia nangatahana hirotsaka an-tsehatra hanelanelana amin'ireo manampahefana tao Emira Arabo Mitambatra mba hitakiana ny hamotsorana azy avy hatrany ary, satria ny ankamaroan'ireo fisamborana natao an'ireo gadra noho ny heviny tao UAE dia narahana fanomezana sazy fampidirana am-ponja avy amina sarintsarina fitsaràna, niainga avy amina vesatra diso.
Ny 30 Aprily 2020, naneho ny faniriany hahita indray ilay firenen'ny fahazazàny i Alaa, ny tanànan'i Sharjah ao UAE.
Tsy raharahaina izay lazain-dry zareo, tsy olana izay hitranga, tsy olana izay vita, ianao no mitoetra ho ilay fiandohana, morona sy seranana farany.
Ny 31 Aogositra 2020, nandefa bitsika momba ny rainy izy :
Tamin'ny 2012 aho no nahita farany ny raiko
Ny 2013 aho no nandre farany ny feony
Ny 2016 ny fianakaviako nahita azy farany sy nandre ny feony
Ny 2018 nosarahana taminay izy. #Heloka_ny_fitazonana_fahatany #Avotsory_ireoGadra_UAE
Namerina ireo eritreriny ireo izy raha nitafa tamin'ny BBC tamin'ity taona ity, izay nandefasana bitsika mikasika izany tamin'ny 14 Febroary 2021, nahazoana fanehoankevitra mihoatra ny 2200.
Ampahany iray amin'ny tantarako no nozaraiko teto. Ny lafy iray amin'ny endriky ny fitondrana Emirati, ny tantaran'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny famoretana azy, ny tantaran'ireo Emirati any am-ponja noho ny heviny izay tsy maintsy atao ren'izao tontolo izao ny momba azy. Ny raiko, Mohammed Abdul Ruzzaq Al-Siddiq sy ireo mpiara-mifonja aminy, Ahmed Mansour, Nasser BinGhaith, miaraka amin'ireo tatitra avy amin'ny Human Rights Watch sy ny Amnesty.
Hita teny amin'ny endriny ny fanaintainany ary nanganonhano ny masony, ireto teny ireto no nanombohan'i Alaa ilay antsafa: “Ny raiko, hatramin'ny 2013 no tsy nandrenesako intsony ny feony.”
Mohammed Abdul Ruzzaq Al-Siddiq, gadra noho ny fanehoan-keviny tao UAE. Sary tao amin'ny Twitter an'i Alaa.
Taona iray talohan'izao, ny 14 Febroary 2020, nobitsihan'i Alla ny taratasy iray nosoratany ho an-drainy ka tao anatin'izay izy no nanoratra hoe “tsy hahazo ny rainy—tahaka ny efa mahazatra.”
Nofaranany ilay taratasy mahavaky fo, tamin'ny nilazàny hoe: “Fito taona lasa izany ny raiko no nandao ny trano ary tsy mbola tafaverina hatramin'izao. Gadra no niantsoan-dry zareo azy ary dia nalefany tany am-ponja, fa izaho nanome anarana azy hoe voromahery iray ary nametraka azy ato am-poko.”
Andro vitsy talohan'ny nandehanany ho any amin'ny mandrakizay, nandefa bitsika iray hafa i Alaa nasiany ny sarin'ny rainy sy teny fohy toy izao:
Tsy hanadino anao aho
Mohammed, izay nosamborina tamin'ny 2012 niaraka tamin'ilay andiana mpifonja lasa fantatra amin'ny anarana hoe “UAE94“, dia voaheloka tamin'ny 2013 hifonja 10 taona tao amina fitsarana iray nofaritana ho nitanila, nampijaliana izy ary niatrika fampihorohoroana / fandrahonana ho faty. Tsy nandraisan'ny fitsaràna fepetra ny momba ny fampijaliana natao azy.
Ny fiarovana ny ray niteraka azy no nanombohan'i Alaa, ary niafara tamin'ny fiarovana ny zon'ireo olona hafa.
Ny 13 Jona, andalana iray avy ao anatin'ny Korany no bitsika farany nalefany:
Ary tsy ho ela dia ho “hita ny ezaka nataony
Azo itarafana ny maha-olona azy sy ny fandavantenany hiarovana ny zon'olombelona sy ireo iharan'ny tsy rariny ilay bitsika, ireo dia samy teraka avy amin'ny fahatsorany sy ny haavon'ny fahatsapàna mandray andraikitra ananany.
Ny 19 Jona 2021, maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina i Alla, tao Oxfordshire, UK.
Tena nalahelo mafy azy ireo rehetra nahafantatra an'i Alaa noho ny famoizana ity olona tokana an-tany ity, mpiaro am-pahasahiana ny zon'olombelona, ary teratany Emirati natanjaka sy nanana fahalalàna ambony izay nilaza ny marina sy niatrika ny tsy rariny teren'ireo manampahefana ao Abu Dhabi ho arahan'ireo olompirenena fatra-panaja ny lalàna ao amin'ny fireneny sy ny an'ireo firenena mpiray vodirindrina.
Ho an'ny maro, i Alaa no endrika kinova ahitàna ny atao hoe Silamo marina sy feno fanajàna ny olombelona. Nambarany ny fandavantenany manoloana ireo olana saropady ao amin'ny faritra Afovoany-Atsinanana ary Afrika Avaratra, ka teny amin'ny lohalaharana tamin'ireny ny momba ireo Palestiniàna, ary koa ny fahavononany hanampy ireo olona tra-pahasahiranana manerana ny tany.
Ao anaty faritra iray izay toy ny lasa natao ho fenitra ao anatiny ny fanitsakitsahana zon'olombelona, ary tsy raharahian'ny any ivelany, tena nilaina tokoa ny hatsaram-panahin'i Alaa, ny fahasahiany ary ny fahamboniany, ary dia tena ho fahabangàna goavana ho anay.